खबर मञ्च, Author at खबरमञ्च - Page 4947 of 4952 खबरमञ्च
You are here: Home > Articles by खबर मञ्च - Page 4947
ओली सरकार !
By खबर मञ्च / May 22, 2016 / बाल चाैतारी / 1 Comment
भोलि भोलि भनेर जनतालाई झोली भिराउने यो देशमा, नयाँ भोलि देखाउँदै आयौ तिमी ओली सरकार । निराशा र अन्योलता छाएको नेपाली मनमा, नयाँ नेपालको आशा जगायौ तिमीले ओली सरकार । उखान-टुक्का राम्रै हान्छौ,भाषणमा नि कहाँ कम छौ, आफ्नै कुरो अघि सार्न, विपक्षीलाई तल झार्न, ओली सरकार ! तिमी पोख्त रैछौ । आउँछ आउँछ भन्ने गर्थे, […]
By खबर मञ्च / May 22, 2016 / कला / साहित्य / Comments Off on स्पर्श गर्नुपर्छ
स्पर्श गर्नुपर्छ आफ्नो मन मुटु र मष्तिस्कलाई
पढ्नु पर्छ आँशु झादा झार्दै यो जिन्दगीलाई
अाेझेलमा परेकाे लेटाङ
By खबर मञ्च / May 22, 2016 / समाज / Comments Off on अाेझेलमा परेकाे लेटाङ
लेटाङ । धेरै अघिदेखि जान मन लागेको ठाउँ, तर समयले जान जुराइरहेको थिएन । मोरङको उत्तरी ‍क्षेत्र जुन भर्खरै नगरपालिकामा परिणत भएको छ, लेटाङ भोगटेनी नगरपालिका । धेरै प्रयासपछि त्यो ठाउँ जाने मौका मिल्यो । हाम्रो टोलीमा म, बुवा र मामा थियौं । मन खुसी थियो त्यो भन्दा ज्यादा त्यो ठाउँमा केही नयाँ कुरा पाइन्छ […]
मानसिक रोगीले सोच बदल्नुपर्छः मनोविद् वासु आचार्य
By खबर मञ्च / May 22, 2016 / अन्तरवार्ता, स्वास्थ्य / Comments Off on मानसिक रोगीले सोच बदल्नुपर्छः मनोविद् वासु आचार्य
नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मानसिक रोगीहरुलाई निशूल्क परामर्श दिने मनोविद हुन् बासु आचार्य । उनले धेरै मानसिक रोगीहरुलाई परामर्श दिएर ठिक पारेका धेरै उदाहरणहरु छन् । २०७२ साल बैशाख १२ गतेकाे बिनाशकारी भूकम्पपछि भूकम्प पीडितहरुका लागि निशूल्क रुपमा उनले मनोबैज्ञानिक कक्षाहरु सञ्चालन गरे । उनी अहिले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मानसिक रुपमा अस्वस्थ रहेकाहरुलाई निशूल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श […]
ह्वाट्सएपलाई टक्कर दिन गुगलले ल्यायो एल्लो एप
By खबर मञ्च / May 22, 2016 / सूचना/प्रविधि / Comments Off on ह्वाट्सएपलाई टक्कर दिन गुगलले ल्यायो एल्लो एप
ह्वाट्सएप तथा हाइक जस्ता इन्स्टान्ट मेसेजिंग एपहरुलाई टक्कर दिनका लागि गुगलले कम्मर कँसेको छ । गुगलले एल्लो नामको नयाँ एप ल्याएको छ र उक्त एपमा विभिन्न शानदार फिचर्स समेत दिएको छ । यद्यपि एल्लो एप अहिले प्ले स्टोरमा उपलब्ध छैन । तर प्रयोगकर्ताले यो एपका लागि आफ्नो अकाउन्ट दर्ता गर्न सक्दछन् । अहिले दर्ता गरिसकेपछि […]
By खबर मञ्च / May 22, 2016 / विश्व विचित्र, स्वास्थ्य / Comments Off on होचो हुनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक !
के तपाईलाई अग्लो हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । निःशन्देह अझै पनि धेरै मानिस अग्लो हुन नै मन पराउँछन् । अग्ला मानिस धेरै हिड्न सक्ने, आर्कषक र सफल हुने आम विश्वास छ । त्यस्तै पछिल्ला दिनमा महिलको उचाईलाई धेरै महत्व दिइन्छ । अग्ला महिला पुरुषको तुलनामा अझ बढी आकर्षक देखिन्छन् भन्ने मान्यताले पनि आम महिलामा […]
विप्लव समूहका मुस्ताङ इञ्चार्ज पक्राउ
चीन र भारतका राजदूतले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटे